'American Horror Story' Season 10 Shares A Anya nke Ogologo uwe ya na-eyi nnukwu anụ mmiri
Mbido Akụkọ Ntụrụndụ ụjọ 'American Horror Story' Season 10 Shares A Anya nke Ogologo Uwe na-eyi nnukwu anụ
'American Horror Story' Season 10 Shares A Anya nke Ogologo Uwe na-eyi nnukwu anụ
by Trey Hilburn III March 11, 2021 22,053 echiche
American Horror Story oge 10 ozi ọma na-amalite ikpo elu. Anyị na-akọrọ ozi ọma Macaulay Culkin si Ọrụ gosipụtara na Ryan Murphy's Instagram. Ugbu a, anyị ga-ahụ anụ ahụ zuru oke nke ụfọdụ ihe okike ndị toro eto anyị hụrụ ka a na-ama njakịrị na teaser nke emeburu n'afọ a.
Nnukwu dudes ndị a dị ogologo na uwe ogologo nkecha ka ha na ezé ha dị nkọ. Ihe ndị ae kere eke vampire na-adị ka anya adịghị ama? Ọ bụrụ na ị hụla Nda 2, nke ahụ nwere ike ịbụ ihe kpatara ụmụ okorobịa a ji mara nke ọma.
Ndị vampires na Nda 2 òkè a yiri nnọọ anya. Isi nkwọcha, ezé dị nkọ na uwe ogologo. Yep. Lelee, lelee ma lelee. Ajụjụ buru ibu ugbu a bụ, vamps ndị a?
Akara nke oge ikpeazụ nke American Horror Story bụ Massachusetts. Nke a nwere ike ịbụ Ryan Murphy gbara Lot nke Salem? Agbata obi na silhouettes ndị ahụ na-adịghị mma ga-adị ka ha ga-adaba nke ọma, ụwa ụwa. E nwere ugbu a ọzọ Lot nke Salem na ụzọ ugbu a, ya mere na nke a ga-abụ oge dị egwu maka ọzọ na-ewere ụwa ahụ. Mana, ọ bụrụ na ị hụla AHS ị maraworị na Murphy na-awụli elu gburugburu dị ka nzuzu. Echere m, chee echiche maka mgbapu AHS. Onye ahụ metụtara ndị na-egbu ọchụ, nnukwu anụ, freaks, ndị nọn nwere, nke ahụ bụ mmalite. Yabụ, ma eleghị anya vamps ndị a, ọ bụrụ na ha bụ vamps, nwere ike ịbụ obere akụkụ nke akụkọ ka ukwuu.
Ọ dịghị ka Murphy ikwughachi isiokwu na American Horror Story emeworị vampires na mbụ. Yabụ, ha na-alaghachi? Ọfọn, anyị amaghị ma anyị nwere ike ịkọ nkọ ma ugbu a ọ ga - ejide n'aka na ọ na - achọ ụzọ ahụ.
Gịnị ka unu na-eche banyere ndị ọhụrụ si American Horror Story? Chee na nke a nwere ike ịbụ nke Murphy Lot nke Salem? Mee ka anyi mara na ngalaba a.
Lelee foto site na Rexter Revival ebe a.